को हुन यी युवती ? जो ‘बोल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन् - ramechhapkhabar.com
को हुन यी युवती ? जो ‘बोल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन्
सञ्जाल मार्फत भाइरल भएकी युवतीका कुनै मोडल या हिरोइन नभई सामान्य युवती उनको फलोअरको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भएकी युवतीका कुनै मोडल या हिरोइन नभई सामान्य युवती हुन् । तर उनको तस्विरलाई हेर्दा यस्तो लाग्दैन् । यी युवतीकाे तस्विरले सामाजिक संजालमा निकै चर्चा कमाएकाे थियाे ।